१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) -कस्ले पदक जिते ? – Online Annapurna
१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) -कस्ले पदक जिते ?
१७ मंसिर २०७६, मंगलवार ०२:३७ December 3, 2019 155 Views
पोखरा, मंसिर १७ गते-१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत पोखरामा सोमबारदेखि ट्रायथलन सुरु भएको छ । पहिलो दिन पुरुष र महिला तर्फ स्प्रिन्ट विधामा दुई स्वर्णका लागि खेल भयो । नेपाल र भारतले स्वर्ण जितेका छन् । सोमबारको खेलमा भारतले दुई रजत र एक कास्य तथा नेपालले थप एक कास्य पदक प्राप्त ग¥यो ।
महिला स्प्रिन्ट विधामा नेपालकी सोनी गुरुङले स्वर्ण पदक जितेकी हुन् । पुरुष तर्फ भारतका आदर्श एम. एन. सिनामोलले स्वर्ण पदक जितेका छन् । सोनीले निर्धारित दुरी १ घण्टा १३ मिनेट ४५ सेकेण्डमा पार गरेकी थिईन् । भारतका आदर्शले १ घण्टा २ मिनेट ३१ सेकेण्डमा दुरी पार गरेका हुन् ।
महिलातर्फ रजत र कास्य पदक दुवै भारतले हात पारेको छ । निर्धारित दुरी १ घण्टा १४ मिनेटमा पार गर्दैसारोजिनी देवी थाउदमले रजत र १ घण्टा १४ मिनेट ५७ सेकेण्डमा दुरी पार गर्दै प्रगन्या मोहनले कास्य जित्न सफल भएकी हुन् ।
पुरुषतर्फकै निर्धारित दुरी १ घण्टा २ मिनेट ५९ सेकेण्डमा पार गर्दै विश्वरजित साईखोमले भारतलाई रजत पदक हासिल गर्न सफल भए । नेपालका लागि बसन्त थारुले १ घण्टा ३ मिनेट ६ सेकेण्डमा दुरी पार गर्दै कास्य प्राप्त गरेका छन् ।
नेपालका लागि ट्रायथलनका मुख्य प्रशिक्षक युवराज सिलवालले स्वर्ण पदक जितेकोमा खुशी मिलेपनि दुरी पार गर्ने समयमा अझै राम्रो नतिजा निकाल्न नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्– ‘भारत हाम्रो मुख्य प्रतिद्वन्द्वी रहेको छ । हामीेले महिलातर्फ २ स्वर्ण र मिक्स रिलेमा १ स्वर्ण हामीले प्राप्त गर्ने गरी प्रशिक्षण गराएका छौं । पुरुषमा केही कमजोर देखिएपनि दुआथलनमा स्वर्णको आशा गरेका छौं । पुरुषतर्फ रजत जित्नेमा हामी ढुक्क छौं ।’
सोमबार १३ औं साग अन्तरगत ट्रायथलन विधामा पुरुष र महिलाको दुई खेल भएको थियो । जसमा दुवै तर्फ ७ सय ५० मिटर दुरीको पौडी, २० किलोमिटरको साईकिलिङ र ५ किलिमिटरको दौडको दुरी तय गरिएको थियो ।
३ दिनसम्म चल्ने ट्रायथलन पुरुष र महिला दुवै विधामा हुने प्रतियोगितामा अन्र्तगत नेपाल, भारत र श्रीलंका गरी तीन देशका २६ खेलाडीको सहभागिता रहेको छ । मंगलबार पुरुष र महिलातर्फको स्प्रिन्ट विधाको दुआथलन र बुधबार मिक्स रिले ट्रायथलन हुने भएको छ । दुआथलनका लागि ५ किलोमिटर दौड, २० किलोमिटर साईक्लिङ र २.५ किलोमिटर दौडको दुरी तय गरिएको छ । त्यसैगरी, मिक्स रिले ट्रायथलनका लागि ३ सय मिटर पौडी, ६ किलोमिटर साइक्लिङ र २.५ किलोमिटर दौडको दुरी तय गरिएको छ ।
दोश्रो पटक सहभागी बनेको नेपालले यस अघिको १२ औं सागमा मिक्स टिम रिले तर्फ १ रजत र महिला स्प्रिन्ट विधामा १ कास्य प्राप्त गरेको थियो ।
महिला क्रिकेटमा नेपाल १० विकेटले विजयी
एकै खेलमा चार कीर्तिमान
साग गल्फ मंगलबार देखि
१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत गल्फ खेल मंगलबार देखि पार ७२ को गोकर्ण फरेस्ट गल्फ रिसोर्टमा सुरु हुँदैछ । पार ७२ को कोर्समा बिहान १० बजे सुरु हुने प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडीले सोमबार अभ्यास खेल खेलेका छन् ।
सागमा पुरुष ब्यक्तिगततर्फ नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका र भुटानले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । महिलामा नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकागरी तीनदेशको मात्र सहभागिता रहेको छ । महिला टिम र एकल दुवैमा कम्तीमा सहभागी देशको कांस्य पदक पक्का भएको छ । भुटानले पुरुष टिम स्पर्धामा भाग लिएको छैन । भुटानबाट निम दोर्जी तामाङ एक्लै ब्यक्तिगत स्पर्धामा सहभागी छन् । पाकिस्तानले अन्तिममा आएर गल्फ नखेल्ने निर्णय गरेको थियो ।
पुरुष टिम स्पर्धामा पनि सहभागी देशको कम्तीमा कांस्य पदक पक्का भएको छ । गल्फको पुरुष स्पर्धामा नेपालले स्वर्ण पदक जित्ने लक्ष्य राखेको नेपाली टोलीका ब्यवस्थापक सिवी भण्डारीले बताए । नेपालका खेलाडीले दैनिक औसत तीन अन्डर पार खेलिरहेका छन् । पुरुषमा नेपालले ब्यक्तिगत र टिम स्पर्धा दुवैमा स्वर्ण जित्ने देखिन्छ, भण्डारीले भने ।
नेपालका महिला गल्फ खेलाडीको तयारी पछि मात्र सुरु गरिएकोले केही भन्न नसकिने भण्डारीले बताए । गल्फमा पुरुषतर्फ नेपालबाट टंकबहादुर कार्की, शुक्रबहादुर राई, सुवास तामाङ र निरज तामाङले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । महिलामा कस्मिरा शाह, रबिना श्रेष्ठ र शुस्मा कोइरालाले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । साग गल्फमा चार स्वर्ण, चार रजत र चारनै कांस्यका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ । आयोजकको हिसावले नेपालले सागमा गल्फ खेल राखेको हो । गल्फ खेल ‘स्टोक प्ले’ विधामा ७२ होलको हुनेछ ।
दक्षिण एसियाली खेलकुद अन्तर्गत लन टेनिसमा नेपालका पुरुष र महिला टिम सेमिफाइनलमा पुगेका छन् ।
सातदोबाटोस्थित लन टेनिस कोर्टमा आज भएको क्वार्टरफाइनलको खेलमा नेपालले बंगलादेशलाई हराउँदै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो । नेपालले ३–० को सहज जित निकालेको हो । पुरुष सिंगल्समा नेपालका प्रणव खनालले मोहम्मद आलमगिरलाई ६–० र ६–१ मा हराए ।
डबल्समा नवीन पाइजा र प्रदीप खड्काको जोडीले सोझो सेटमा जित निकाल्दै नेपाललाई ३–० को जित दिलाए ।
अब नेपालले भारतसँग प्रतिष्पर्धा गर्नेछ । भारतले भने बाई पाएर सोझै सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको छ ।
त्यस्तै तान्डिन वाङ्चुकले इग्नाज मन्सुरलाई ६–२ र ६–४ ले हराए ।
डबल्समा निदुप ग्याछेन र पेमा नोर्बुको जोडीले नाजिफ हुसेन र इग्नाज मन्सुरको जोडीलाई ४–६, ६–४ र ७–६(३) ले हराए । भुटानले सेमिफाइनलमा पाकिस्तानसँग खेल्नेछ ।
१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तरगत टेबलटेनिसको पुरुष टिम इभेन्ट्समा नेपालले लिग चरणको पहिलो खेलमा जित हात पारेको छ। लैनचौर स्थित टेनिस हलमा भएको खेलमा नेपालले श्रीलंकामाथि ३(१ सेटको जित हात पारेको हो। अब नेपालले सेमिफाइनल प्रवेशका लागि मंगलबार माल्दिभ्सँग खेल्नेछ। नेपालबाट टिम इभेन्टमा स्यान्टु श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम बज्राचार्य र शिव सुन्दर गोथेले सहभागिता जनाएका थिए। आजै भएको खेलमा भारतले पाकिस्तान र बंगलादेशमाथि जीत हात पारेको छ। दुवै खेलमा भारतले ३(० को सोझो सेटमा जित हात पार्यो। भारत सेमिफाइनलमा पुगिसकेको छ। यस्तै श्रीलंकाले यसअघि भएको पहिलो खेलमा माल्दिभ्स लाई ३(० को सोझो सेटमा पराजित गरेको थियो। महिलातर्फ नेपाली टोली महिला तर्फ आज भएको खेलमा भारतले माल्दिभ्स र पाकिस्तानलाई समान ३(० कै सेटमा पराजित गरेको छ। यता श्रीलंकाले महिलातर्फ बंगलादेशलाई ३(१ को सेटमा पराजित गरेको छ। भारत महिला तर्फपनि सेमिफाइनलमा पुगिसकेको छ। महिला तर्फ नेपाली टोलीले श्रीलंकासँग ३(० सेटमा पराजित भएको छ। नेपाली महिला टोलीले भोलि बंगलादेशसँग खेल्नेछ। मंगलबार बिहान लिग चरणकम बाँकि खेल हुनेछन् भने सेमिफाइनल दिउँसो १स्३० बजे सुरु हुनेछ । यस्तै टिम इभेन्ट महिला र पुरुष मंगलबार ४ बजे फाइनल हुनेछ ।
नेपालले घरेलु मैदानमा जारी १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा तेक्वान्दोको पुम्से विधातर्पm कुल ७ स्वर्ण जितेको छ ।
सातदोबाटोस्थित नेपाल तेक्वान्दो संघको एकेडेमी हलमा मंगलबार सम्पन्न १३ स्वर्णको प्रतिस्पर्धामा नेपालले ७ स्वर्ण जितेको हो ।
त्यस्तै श्रीलंकाले तीन स्वर्ण जित्दा भारतले दुई र बंगलादेशले एक स्वर्ण हात पार्न सफल भयो । नेपालका लागि आयषा शाक्यले दुई स्वर्ण दिलाउँदा पार्वती गुरुङ, सिना मादेन र कमल श्रेष्ठले स्वर्ण जितेका छन् । नेपालले महिला टिम पुम्सेतर्पm १७–२९ वर्षउमेर समूह(निसा दर्नाल, स्वस्तीका तामाङ र सञ्जिला तिमल्सिना) र २३ वर्षमाथि उमेरसमूह(निता गुरुङ, प्रशांसा क्षेत्री र सुशीला राई)मा स्वर्ण जित्न सफल भएको हो ।
नेपालका लागि आयषाले २९ वर्षमाथिको व्यक्तिगत पुम्से र जोडी (सञ्जीवकुमार ओझासँग मिलेर) गरी दुई विधातर्पm स्वर्ण दिलाइन् । व्यक्तिगत विधातर्पm आयषाले ८.९४० र भारतकी प्रजक्ता प्रकाशले ७.६४० स्कोर ल्याइन् । यस विधामा श्रीलंकाकी गायत्री सन्दामर्ली(७.७५५०)ले र बंगलादेशकी मौसुमी (७.३६०) ले कांस्य पदक जितिन् ।
२९ वर्षमाथिकै जोडी पुम्सेमा आयषा र सञ्जीव कुमार ओझाको जोडी (८.१६)ले पाकिस्तानका महरुन र सहबाज अहमदको जोडी (७.८६)लाई पछि पारेका थिए । यस विधामा श्रीलंकाका लक्षमन एन्डिस र गायत्रीको जोडी (७.८६०) तथा बंगलादेशका दिपु चक्मा र मौसुमको जोडीले कांस्य पदक जिते ।
त्यसैगरी नेपालका लागि महिला पुम्सेतर्पm पार्वती गुरुङ र सिना मादेन तथा पुरुष पुम्सेमा कमल श्रेष्ठले स्वर्ण दिलाए । सिनाले १७ देखि २३ वर्ष, पार्वतीले २३ देखि २९ वर्ष र कमलले २३ देखि २९ वर्षउमेर समूहमा स्वर्ण जितेका हुन् । सिनाले ८.२५० स्कोर ल्याउँदा भारतकी रूपमा बायोरले ८.१३० स्कोर ल्याइन् । यस विधामा श्रीलंकाकी इसुरी मेन्डिस र बंगलादेशका अकिरी अक्तेरले कांस्य जितिन् ।
२३ देखि २९ वर्ष उमेर समूहमा स्वर्ण विजेता पार्वतीले ८.२५० अंक ल्याउँदा रजत विजेता श्रीलंकाकी रनपतिपुरा जयविरालले ८.१४० अंक ल्याइन् । यस विधामा बंगलादेशकी नुरनहर अक्तेर र भारतकी हर्षा सिंघाले कांस्य पदक जितिन् ।
सोही उमेर समूहमा नेपालका कमलले स्वर्णका जित्दा ८.२७० अंक ल्याए । भारतका राहुल जैनले ८.१८० ल्याउँदा रजत पदकमै खुम्चिए । यस विधामा श्रीलंका निसाकां जयसिंघे(८.१५) र बंगलशादेशका मेहदी हसन (८.०६०)ले कांस्य पदक जिते ।
१७ वर्षदेखि २३ वर्षउमेर समूहको व्यक्तिगत पुम्सेमा भने नेपालका कृष्णबहादुर तामाङ रजत पदकमा खुम्चिए । कृष्णबहादुरले ८.२०० ल्याउँदा श्रीलंकाका रनुकाप्रभाथ मेनिक पेडीले ८.२५० अंक ल्याए । यस विधामा भारत लालथला मुइनपुई(८.१२०) र बंगलादेशका कमरुल इस्लाम(८.०९०) ले कांस्य पदक जितेका छन् ।
पुरुष २९ वर्षमाथिको पुम्सेमा बंगलादेशका दिपु चक्मा(८.११०)ले स्वर्ण जित्दा श्रीलंकाका लक्षमन एन्ड्रिस (८.११०)लाई पराजित गरे । यस विधामा नेपालका रेजिन धिमाल (८.०१०) र भारतका गाङफुङ गाङ्स (८.०३०) ले कांस्य पदक प्राप्त गरे । १७ देखि २३ वर्ष उमेरसमुहको पेयर पुम्सेमा श्रीलंकाले स्वर्ण, भारतले रजत तथा नेपाल र बंगलादेशले कांस्य पदक जिते ।
२३ वर्षदेखि २९ वर्षउमेर समूहको पेयर पुम्सेमा भने भारतले स्वर्ण जित्दा गौरव सिंह र हर्षा सिंघेको जोडीले सफलता दिलाए । यस विधामा श्रीलंकाकाले रजत प्राप्त गर्दा नेपालका जीतबहादुर बोट र पार्वती गुरुङ तथा बंगलादेशका मेहदी हसन र नुरनहरले कांस्य पदक जिते ।
भुटान शीर्ष स्थानमा
काठमाडौं । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको पुरुष फुटबलका खेल सोमबारदेखि सुरु भएको छन् र पहिलो दिनका दुई खेलपछि भुटानले आश्चर्यजनक अग्रता लिएको छ । राउन्ड रोबिनको आधारमा सुरु भएको प्रतियोगिताको पहिलो दिन स्पष्ट जित निकाल्ने टिम भुटान मात्र रह्यो र यसस“गै उसले पा““च टिम सम्मिलित टिममा शीर्ष स्थान कब्जा ग¥यो ।
दशरथ रंगशालामा भएको पहिलो खेलमा भुटानले बंगलादेशलाई १–० ले हरायो । दोस्रो खेलमा भने माल्दिभ्स र श्रीलंकाले गोलरहित बराबरी खेले । श्रीलंका खेलको अन्तिम १० मिनेट १० खेलाडीमा सीमित रहेर माल्दिभ्सलाई बराबरीमा रोक्न सफल भएको हो । पहिलो खेलमा भुटानका तर्फबाट भएको एक मात्र गोल चेन्चो ग्याल्चिनको नाममा रह्यो ।
भुटानी रोनाल्डोको नामले चिनिने ग्याल्चिनले ६५ औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरे । फुब थिन्लेको पासलाई सदुयोग गर्दै उनले नजिकको दूरीबाट गोल गरे । खेलपछि कप्तानले भने, ‘आजको खेलमा हाम्रँे उद्देश्य तीन अंक प्राप्त गर्नु थियो र हामी यसमा सफल रह्यौं ।’ प्रशिक्षक पेमाले भने खेलको सुरुमा टिमलाई केही गाह्रो भएको स्विकार्दै त्यसयता भने आप््mनो टिमले लय समातेको बताए ।
उनले भने, ‘आजको नतिजामा हामी स्वभाविक रूपमा खुसी छौं ।’ उनले मंगलबार नेपालविरुद्ध हुने खेललाई लक्षित गर्दै भने, ‘नेपालविरुद्धको खेलमा सबै आप्mनै टिमको समर्थनमा हुनेछ । हामी आशा गर्छौ, हाम्रोप्रति पनि केही समर्थन हुनेछ ।’ यस्तै बंगलादेशका प्रशिक्षक जेम्स डेले आप्mनो टिम हारका लागि पूर्ण रूपमा हकदार भएको माने ।
उनले भने, ‘आज हाम्रा कोही पनि खेलाडीले खेल्न सकेनन्, सबैको प्रदर्शन बिर्सनलयाक रह्यो । आजको कमजोर प्रदर्शनबाट हाम्रा खेलाडी शिक्षा लिनु पर्छ । आजको दिन हाम्रो लागि वास्तवमै खराव रह्यो ।’ दोस्रो खेलको विश्लेषण गर्दै श्रीलंकाली प्रशिक्ष्ँक एमएम प्याकिरालीले आप्mनो लागि बराबरीको नजिजा सुखद रहेको बताए ।
यस्तै माल्दिभ्सका प्रशिक्षक पिटर सेगर्टले आप्mनो टिमको प्रदर्शन कमजोर रहेको तथ्य स्विकार्दै जितका लागि गोल गर्नु पर्ने र यसमा आप्mनो टिम सफल रहेको माने । उनले पहिलो खेलको उदाहरण गर्दै त्यसमा बंगलादेश पराजित रहनुले पूरा प्रतियोगितामा सबै टिम समान रूपमा उपाधिको दावेदार रहेको बताए ।
पोखरामा पनि आतिसवाजी सहित सागको शुभारम्भ
पोखरा १७, मंसिर
आइतबार काठमाण्डौंमा भव्य समारोहका बिच उद्घाटन भएको भोलि पल्ट ८ वटा खेल हुने पोेखरामा पनि काठमाण्डौंकै जस्तै गरी आतिसवाजी सहित उक्त खेलको शुभारम्भ गरिएको हो । उद्घाटनको अवसरमा मार्च पासमा सोनी गुरुङले नेपालको झण्डा बोकेकी थिइन्। उनले ट्राय्थलनमा पोखराबाट पहिलो स्वर्ण पदक दिलाएकी हुन्। ७ देशका खेलाडी एवं अफिसियलहरुलाई पोखरामा स्वागत गर्न पोखरा रंगशाला सिंगारिएको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्माले सागको अवसरमा पोखरामा धेरै खेलकुद पूर्वाधार निर्माण भएको बताए । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिब रमेशकुमार शिल्वालले अघिल्लो कार्यसमितिले गर्न नसकेको बक्यौता १३ औं साग आफ्नो कार्यकालमा सम्भाव भएको दाबी गरे । ”राखेप सदस्य राजेश कुमार गुरुङले छोटो समयका बाबजुत खेलकुदका धेरै भौतिक पुर्वाधार निर्माण भएको बताउदै यसमा केही गल्ती हुन सक्ने जनाए । उद्घाटनको अवसरमा विभिन्न जनजातिको भेषभुषा भल्कने भेषभुषा सहित ७ राष्ट्रका खेलाडीहरुले आफ्नो झाण्डा सहित मार्च मास गरेको १३ औं साग डिपुटी सेफ दी मिसन तथा नेपाल ओलम्पिक कमिटिका उपाध्यक्ष समेत रहेका तेज बहादुर गुरुङले बताए । पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले पोखरामा हुने १३ औं सागलाई सफल पार्न सवैमा आग्रह गरे ।
भलिबलमा श्रीलंकालाई दुई कांस्य
श्रीलंकाले १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत महिला तथा पुरुष भलिबलमा कास्य पदक जितेको छ ।
त्रिपुरेश्वरस्थित राखेप कभर्डहलमा सोमबार भएको महिलातर्फको खेलमा माल्दिभ्सलाई ३–० को सोझो सेटमा पराजित गर्दै श्रीलंकाले कास्य जितेको हो । श्रीलंकाले माल्दिभ्समाथि २५–१३, २५–१८ र २५–८ को जित निकाल्यो । पुरुषतर्फ श्रीलंकाले बंगलादेशलाई २३–२५, २५–२०, २५–१६ र २५–१ ले हरायो । फाइनल मंगलबार हुने छ ।
पहिलो दिन नेपाललाई सात तथा पाकिस्तानलाई दुई स्वर्ण
नेपालको दुवै टोली सेमिफाइनलमा
सागअन्तर्गत खो खोतर्फ नेपालको पुरुष÷महिला दुवै टोली सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् । राउन्ड रोविन्ड लिगको अन्तिम दिन पुरुष तथा महिला दुवैमा सेमिफाइनल समीकरण पनि तयार भएको छ ।
पुरुष÷महिला दुवैमा भारत, नेपाल, श्रीलंका र बंगलादेश क्रमशः शीर्ष चार स्थानमा रहँदै सेमिफाइनलमा पुगेका छन् । सेमिफाइनलमा भारतले श्रीलंका तथा नेपालले बंगलादेश विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् ।